Petta (2019) | MM Movie Store
————————————————သိပျကို ဆိုးတဲ့ ကြောငျးသားတှကွေားအဆောငျမှူးနရောကို အတငျးရယူလာတဲ့ လူတဈယောကျ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။ကာလီတဲ့။အသကျကွညျ့တော့ လူကွီးပိုငျးရောကျနပွေီ၊ကိုယျ့ကို ထိပါးလာပွီဟဆေို့ရငျ ဘယျသူ့ကိုမှခှငျ့မလှတျသူ။ဒီတော့ ဒီကလေးတှကွေား သူ အဆောငျမှူး ဖွဈခငျြရတဲ့ ရညျရှယျခကျြက ဘာမြားလဲ။
ကြောငျးသားတှေ ထမငျးကောငျးကောငျးစားရဖို့၊ဂြူနီယာတှေ ဘိုကအြနိုငျကငျြ့တာ မရှိဘဲကောငျးကောငျးနထေိုငျရဖို့ သူ ကြောငျးရဲ့ အာ့ကွောလနျအဖှဲ့အပွငျကနျထရိုကျတာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့တယျ။မထငျမှတျဘဲ ညတဈညမှာ ကြောငျးသားတဈယောကျ ခှငျ့မတိုငျဘဲ အပွငျသှားခဲ့တယျ။
ခေါငျးမီးခဲပွီး ကာလီဟာ လိုကျရှာရမှာတော့ခဈြသူနဲ့ သှားတှတေဲ့ ထိုကြောငျးသား အဏ်ဏဝါနဲ့ ရငျးနှီးခဲ့ပါတယျ။အနျကယျကာလီ…. အနျကယျက လူပြိုကွီးလား အိမျထောငျရှိလား တဲ့။တခြိနျက သူ့မှာ ဒါတှေ ရှိခဲ့ကွောငျး နှုတျက ထုတျဖျောမပွောလိုတော့တဲ့ ရငျ့ကကျြခြိနျရောကျခဲ့ပွီလေ။
ကြောငျးစာမေးပှဲပွီး နှုတျဆကျပှဲညမှာအဏ်ဏဝါကို လူတဈစု အန်တရာယျ လာပွုခဲ့တယျ။အဏ်ဏဝါ .. ကြောငျးထဲမှာနတေဲ့ ကြောငျးသား…သူ့မှာ ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ ဒီလို ရနျနဲ့ ရငျဆိုငျရတာလဲ…သိပျကို ဂရုစိုကျလှနျးတဲ့ ကာလီဟာ ဒေါသူပုနျထပါပွီ။
အဏ်ဏဝါဟာ ကာလီနဲ့ ဘယျလို အဆကျအစပျမြိုးလဲ။အဲ့ဒီည လာသတျတဲ့ လူမိုကျတှကေ ဘယျသူတှလေဲ၊ ဘယျသူခိုငျးစခေဲ့တာလဲ။ပိုပွီး ဝမျးနညျးစရာကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးလေး တဈခု ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။အတိတျရဲ့ ဇာတျလမျးတဈခြို့……ကဲ…. ကနျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေိုတော့…ဇာတျကားကွညျ့ရငျး ခံစားရမှာ မဟုတျလားဗြ။
———————————–အသကျကွီးပမေဲ့ မပကျြစီးသေးတဲ့ တမီးလျ မငျးသား ရာ့ဂျြနီး၊မွနျမာကွိုကျ သဘာဝမငျးသား နဝါးဇျ အပွငျ ဗီဂြေးစညျသူပသီတို့မငျးသား သုံးလကျနဲ့ အတူမငျးသမီး ခြောခြောလေးတှနေဲ့ ဇာတျလမျးဟာဝဝေဆောဆာ ဖွဈနပေါတော့တယျ။
အတိုကျအခိုကျကွမျးကွမျးတှေ၊အနုအလှတှနေဲ့အတူ၊ လူ့စရိုကျတှကေို ခံစားကွညျ့ကွပါဦးဗြာ….ဒါက ပွညျနယျကားဖွဈတဲ့ အတှကျသူတို့ပွညျနယျကွိုကျ အကတှေ၊ အိုဗာတှေ ပါနိုငျပါလိမျ့မယျ။ဒါက ငွငျးမရတဲ့ အနအေထားတဈခုဖွဈနပေါတယျ။
————————————————သိပ်ကို ဆိုးတဲ့ ကျောင်းသားတွေကြားအဆောင်မှူးနေရာကို အတင်းရယူလာတဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကာလီတဲ့။အသက်ကြည့်တော့ လူကြီးပိုင်းရောက်နေပြီ၊ကိုယ့်ကို ထိပါးလာပြီဟေ့ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်မလွှတ်သူ။ဒီတော့ ဒီကလေးတွေကြား သူ အဆောင်မှူး ဖြစ်ချင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများလဲ။
ကျောင်းသားတွေ ထမင်းကောင်းကောင်းစားရဖို့၊ဂျူနီယာတွေ ဘိုကျအနိုင်ကျင့်တာ မရှိဘဲကောင်းကောင်းနေထိုင်ရဖို့ သူ ကျောင်းရဲ့ အာ့ကြောလန်အဖွဲ့အပြင်ကန်ထရိုက်တာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။မထင်မှတ်ဘဲ ညတစ်ညမှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ခွင့်မတိုင်ဘဲ အပြင်သွားခဲ့တယ်။
ခေါင်းမီးခဲပြီး ကာလီဟာ လိုက်ရှာရမှာတော့ချစ်သူနဲ့ သွားတွေ့တဲ့ ထိုကျောင်းသား အဏ္ဏဝါနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။အန်ကယ်ကာလီ…. အန်ကယ်က လူပျိုကြီးလား အိမ်ထောင်ရှိလား တဲ့။တချိန်က သူ့မှာ ဒါတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း နှုတ်က ထုတ်ဖော်မပြောလိုတော့တဲ့ ရင့်ကျက်ချိန်ရောက်ခဲ့ပြီလေ။
ကျောင်းစာမေးပွဲပြီး နှုတ်ဆက်ပွဲညမှာအဏ္ဏဝါကို လူတစ်စု အန္တရာယ် လာပြုခဲ့တယ်။အဏ္ဏဝါ .. ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ ကျောင်းသား…သူ့မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ဒီလို ရန်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာလဲ…သိပ်ကို ဂရုစိုက်လွန်းတဲ့ ကာလီဟာ ဒေါသူပုန်ထပါပြီ။
အဏ္ဏဝါဟာ ကာလီနဲ့ ဘယ်လို အဆက်အစပ်မျိုးလဲ။အဲ့ဒီည လာသတ်တဲ့ လူမိုက်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘယ်သူခိုင်းစေခဲ့တာလဲ။ပိုပြီး ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ချို့……ကဲ…. ကျန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့…ဇာတ်ကားကြည့်ရင်း ခံစားရမှာ မဟုတ်လားဗျ။
———————————–အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးတဲ့ တမီးလ် မင်းသား ရာ့ဂ်ျနီး၊မြန်မာကြိုက် သဘာဝမင်းသား နဝါးဇ် အပြင် ဗီဂျေးစည်သူပသီတို့မင်းသား သုံးလက်နဲ့ အတူမင်းသမီး ချောချောလေးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
အတိုက်အခိုက်ကြမ်းကြမ်းတွေ၊အနုအလှတွေနဲ့အတူ၊ လူ့စရိုက်တွေကို ခံစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ….ဒါက ပြည်နယ်ကားဖြစ်တဲ့ အတွက်သူတို့ပြည်နယ်ကြိုက် အကတွေ၊ အိုဗာတွေ ပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါက ငြင်းမရတဲ့ အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
The Heir (2013) ၊ အပိုငျး (၉)